कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १७ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १७ गते)
काठमाडौँ ०७७ वैशाख १७ गते
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा वैशाख १७ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नेपालमा थप तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको जानकारी दिनुभयो । यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५७ पुगेको भन्दै उहाँले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पुनः आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको नमूना परीक्षणमा पर्सा जिल्लाका ४६ वर्षीय पुरुष र बारा जिल्लाका ३१ वर्षीय र ४३ वर्षीय पुरुष गरी थप तीन जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । तीनै जना यसअघि बीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरूसँगै भारतको नयाँदिल्लीबाट फर्किएका थिए । सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएसँगै उनीहरूको उपचार नारायणी अस्पताल बीरगञ्जमा सुरू भएको छ । कुल ५७ सङ्क्रमितमध्ये १६ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । उपचाररत ४१ जनामध्ये भरतपुरमा एक जना, धनगढीमा एक जना, बीरगञ्जमा आठ जना र विराटनगरमा ३१ जना रहेका छन् ।
प्रदेश १ मा वैशाख १७ गतेसम्म आरडीटी र पीसीआर विधिबाट ६ हजार ७० जनाको परीक्षण भएको छ । कोरोना शङ्कास्पद १ हजार ८५ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । वैशाख १७ गतेसम्म २ सय ८१ जना महिला र ८ सय ४ जना पुरुषको नमूना सङ्कलन गरिएको छ । नमूना सङ्कलन गरिएका मध्ये दुई जना महिला र २९ जना पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये १ सय ६१ जना महिला र ७ सय ६९ जना पुरुष गरी ९ सय ३० जनाको रिपोर्ट नेगेभिट आएको छ । शङ्कास्पद व्यक्तिको नमुना सङ्कलन गरिएको मध्ये १ सय २४ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
आरडीटी विधिबाट वैशाख १७ गतेसम्म ४ हजार ९ सय ८५ जनाको एण्टीवडी परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये १३ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये ८ सय २२ जना महिला र ४ हजार १ सय ५० जना पुरुष गरी ४ हजार ९ सय ७२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख १७ गतेसम्म ५ हजार ६ सय २ जना क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । वैशाख १७ गते ७५ ओटा वेड थप गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा ४ सय ७६ जना महिला र १ हजार ७ सय ८२ जना पुरुष गरी २ हजार २ सय ५८ जना बसेका छन् । वैशाख १७ गते ६५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या ६ हजार १ सय ४७ जना पुगेको छ । होम क्वारेन्टाइनमा १ हजार ७२ जना महिला र ५ हजार ७५ जना पुरुष बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख १७ गतेसम्म आइसोलेशनमा बस्नेको सङ्ख्या ३९ जना पुगेको छ । आइसोलेशनमा पाँच जना महिला र ३४ जना पुरुष छन् ।
प्रदेश १ का जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन् । उनीहरूले र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडीटी) विधिलाई बढाउन माग गरेका हुन । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँगको भिडियो कन्फ्रेन्समा समन्वय समितिका प्रमुखहरूले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको अनिवार्य आरडीटी गर्नुपर्ने बताएका छन् । १४ दिने क्वारेन्टाइन अवधि सकिन लागेको भन्दै आरडीटीको दायरा बढाउन समन्वय प्रमुखहरूको माग छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाको सङ्ख्याको आधारमा किट पठाउन समन्वय समिति प्रमुखहरूले माग गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरले हरेक जिल्लालाई दोस्रो चरणमा ३ सय ६० ओटाका दरले किट पठाइसकिएको बताउनु भयो । मन्त्री घिमिरेले १४ ओटै जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई शङ्कास्पद व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गर्ने तालिम दिइसकिएको बताउनु भयो ।
झापामा वैशाख १७ गते प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर सहितको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणले खाद्यान्नलगायत औषधि र कृषिका सामग्री सहज ढङ्गले खरिद गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि झापामा लकडाउन खुुकुलो पार्ने निर्णय भएको छ । वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि ११ बजे सम्म झापामा खाद्यान्न, कृषि र औषधि पसल खोलेर जनजीवन सहज बनाउने निर्णय भएको छ । भोजपुरमा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स चालकलाई कोरोना सङ्क्रमणको डरले कुनै पनि होटल व्यवसायीले बास तथा खान नदिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरका प्रमुख फणिन्द्र थापाले बताउनु भयो ।
प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लामा दुई जना र पर्सा जिल्लामा एक जना गरी तीन जनामा वैशाख १७ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएको हो । प्रदेश २ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा वैशाख १७ गते आयोजित मिडिया ब्रिफिङ्गका क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले उक्त जानकारी दिनु भयो । उनीहरूलाई उपचारको लागि नारायणी अस्पताल बीरगञ्जमा राखिएको छ ।
बारा जिल्ला सीमरास्थित अस्थाई विशेष कोरोना अस्पतालको क्वारेन्टाइनमा बसेका सिम्रोनगढ नगरपालिका–४ घर भई हाल जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१९ मा रहेको एक मस्जिदमा बस्दै आएका ३१ वर्षीय युवक र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ का ४३ वर्षीय युवकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण देखिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका ३१ वर्षीय युवकसँगै ४३ वर्षीय युवक फागुन २८ गते नेपाल आएका थिए । उनीहरूलाई वैशाख १४ गते नै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । क्वारेन्टाइनमा ल्याइएपश्चात उनीहरूलाई पर्सा जिल्ला बीरगञ्ज महानगरपालिका छपकैयामा एम्बुलेन्स मार्फत पुर्‍याएर स्वाव सङ्कलन गरिएको थियो । सोही दिन सङ्कलित स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा पठाइएको थियो ।
यसैगरी, पर्सा जिल्ला बीरगञ्ज महानगरपालिका–२ का ४६ वर्षीय पुरुषमा पनि वैशाख १७ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनु भयो । उनलाई बीरगञ्जमा रहेको सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।
प्रदेश २ मा वैशाख १७ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद २ हजार २ सय १८ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा १ हजार ३ सय ६२ जनाको रिपोर्ट आएको छ । जसमा १ हजार ३ सय ५० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । ८ सय ५६ जनाको रिपोर्ट आउँन बाँकी रहेको छ ।
त्यसैगरी, वैशाख १७ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ४ हजार ९ सय १४ जनाको गरिएकोमा ४ हजार ९ सय ४ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने १० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । प्रदेशमा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या १ सय ७६ रहेकोमा ३ हजार ८ सय ८३ क्वारेन्टाइन बेड रहेको छ । वैशाख १७ गतेसम्म १ हजार ४ सय ४३ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने ४ हजार १७ जना होमक्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । कोरोना आशङ्का गरिएका १३ जना बिरामी आइसोलेशन वार्डमा उपचारार्थ छन् । प्रदेशमा आइसोलेशन बेड सङ्ख्या २ सय ६६ रहेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ मा वितरण गर्दै गरेको राहत सामग्री लिन पुगेका भारतको बिहार राज्य घर भई हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ विश्वकर्मा चोकमा बस्दै आएका ४० वर्षीय सुजित साह प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भए । जनकपुरधाममा ठेला चलाएर जिवनयापन गर्दै आएका साहको लकडाउनले गर्दा मजदुरी गर्न नपाएर वडा कार्यालयले दिन लागेको राहत सामग्री लिन तिरहुतीय गाछी पुगेको बेलामा भिडभाड बढेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा घाइते भएको साहले बताए । साहको उपचार प्रहरीले स्थानीय पाण्डे मेडिकलमा गराएको थियो ।
कोरोना प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई व्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि वैशाख १६ गते परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कोरोना प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि व्याजमा २ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएको हो । तर, यो सहुलियत सबै ऋणीहरूले भने पाउने छैनन् । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो सहुलियत पाउन कोरोनाबाट प्रभावित भएकै हुनुपर्नेछ ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखाएका छन् । ललितपुर जिल्लामा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भन्दै वैशाख १७ गते ३ सय ५३ जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसरले कारबाही स्वरुप कोभिड–१९ का बारेमा दुई घण्टाको कक्षामा राखेर घर पठाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा वैशाख १७ गते थप ४० जनाको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि काठमाडौँ पठाइएको छ । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा ६ सय २१ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकामा ६ सय १३ जनाको परीक्षणकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । अन्यको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा वैशाख १७ गते ६८ जना र हालसम्म ५ हजार ४ सय ११ जनाको र्‍यापीड परीक्षण गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा तनहुँको दमौली अस्पतालको मिर्गौला उपचार केन्द्रमा रगतको अभाव भएको छ । शत्रुध्न मञ्जु मिर्गौला डायलाइसिस केन्द्रमा रगतको अभाव हुँदा मिर्गौलाका बिरामी मर्कामा परेका छन् । उक्त केन्द्रले ४१ जना पुरुष र २७ जना महिला गरी ६८ जना बिरामीलाई नियमित डायलाइसिस सेवा दिँदै आएको छ । ती ६८ जना बिरामीलाई पालैपालो गरी दैनिक २२ देखि २४ जना बिरामीको हप्तामा दुई पटकका दरले डायलाइसिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी र पूर्वी नवलपरासी जिल्लामा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका काममा समेत मानिसको आवागमन हुन थालेपछि कडाइ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
प्रदेश पाँच सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न पाठ्यपुस्तकलाई औषधिजन्य सामग्रीको रूपमा मान्यता दिने भएको छ । लामो समयको लकडाउनपछि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले त्यस्तो मान्यता दिने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ । पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउन सकिए मात्रै अनलाइन, टेलिभिजन, रेडियोको कक्षा प्रभावकारी हुने हुँदा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख थानेश्वर ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लामा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई जिल्ला प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका काममा समेत मानिसको आवागमन हुन थालेपछि कडाइ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन् ।
सुर्खेत जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिका–२ का १८ जना मजदुरहरू वैशाख १५ गते काठमाडौँबाट आएकोमा क्वारेण्टाइनमा नबसी सिधै घर गएका छन् । उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन भनेर वडा अध्यक्ष नोखबहादुर वलीले घर पठाएको मालारानी स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत युवराज ढकालले बताउनु भयो ।
सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिकामा खाद्य उपलब्धताबारे अनुगमन सुरू गरिएको छ । लकडाउनको अवधिमा नगरपालिकामा रहेका स्थानीय व्यापारीहरूसँग भएको खाद्य सामग्रीको पर्याप्तता र आगामी दिनमा स्थानीयलाई कसरी खाद्य पुर्‍याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शारदा नगर उपप्रमुख सावित्रा बस्नेतको नेतृत्वमा एक टोलीले वैशाख १६ गते वडा नम्बर १० बाट अनुगमन सुरू गरेको छ । अनुगमन टोलीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण लामिछाने, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मीना बुढाथोकीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
लकडाउन लम्बिन थालेपछि जुम्ला जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहले एक हप्ता, एक महिना र तीन महिना खाना नपुग्ने घरपरिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गर्न थालेका छन् । राहत वितरण गर्दा सङ्घीय सरकारको मापदण्ड पालना गरिएको नगर उपप्रमुख अप्सरादेवी महतले बताउनु भयो ।
सुर्खेतमा रहेका केही हुम्ला बासीहरूको उद्धार गरिएको छ । नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा रहेका हुम्लाबासीलाई हवाइजहाजबाट उद्दार गर्ने गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको भए पनि वैशाख १७ गतेसम्म कुनै निर्णय नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनीता भट्टराईले बताउनु भयो ।
दार्चुला जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिका–४ का स्थानीयले राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडित छुटाएको तथा राहत वितरण एक वडाबाट अर्को स्थानीय तहसम्म लगेर नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्दै वडा कार्यालयमा वैशाख १७ गते तीन घण्टा धर्ना दिएका छन् । गरिब असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति राहत पाउनबाट वञ्चित भएको स्थानीय डम्मरसिंह ठगुन्नाले बताउनु भयो । अपिहिमाल गाउँपालिकाले लकडाउनको समयमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण हुन नदिन बजार अनुगमन गरी म्याद नाघेका अखाद्य वस्तुलाई नष्ट गरिएको गाउँपालिका प्रवक्ता रविन्द्र बोहराले बताउनु भयो ।
बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाले लकडाउनका समयमा समस्यामा परेका असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा असहाय नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि कोरोना भाइरस लकडाउन मापदण्ड, २०७६ पारित गरी राहत वितरणको तयारी गरेको नगर प्रमुख कृष्णसिंह नायकले बताउनु भयो ।
डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्र उपलब्ध हुन नसकेका औषधि दीर्घरोगीको माग र सूचनाको आधारमा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक गणेश भण्डारीले जानकारी दिनु भयो ।
बाजुरा जिल्लाको खप्तडछेडेदह गाउँपालिका–२ माटेसागुमा रहेको देवस्थलीय माविमा गाउँपालिकाले क्वारेण्टाइन निर्माण गरेको भए पनि त्यहाँ कुनै व्यवस्थापन नभएको क्वारेण्टाइनमा बसेका यज्ञ शाहीले जानकारी दिनु भयो । धनगढीबाट आएका २५ जना वैशाख १५ गतेदेखि उक्त क्वारेण्टाइनमा बसे पनि कुनै स्वास्थ्य चेक जाँच नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अछाम जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिकामा कोरोना रोगको बारेमा सञ्चालित क्रियाकलाप र प्रयासका सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अनुगमन गरी क्वारेण्टाइन, राहत वितरण, स्वास्थ्यकर्मी र सामग्री, नीतिगत निर्णयहरू तथा लकडाउन पालनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुको साथै खाद्य बैङ्क स्थापनाका लागि सल्लाह दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले बताउनु भयो ।
मानसिक बिरामीको समस्यामा रहेका दार्चुला जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–८ का ३८ वर्षीय गोपालसिंह धामीले नेपाल आउन भन्दै महाकाली नदीमा हाम फालेका छन् । एक महिनादेखि धार्चुलाको क्वारेण्टाइनमा रहनुभएका धामीले वैशाख १७ गते महाकाली नदीमा हाम फालेका हुन् । भारतका स्थानीय, सुरक्षाकर्मी र शिविरमै रहेका साथीहरूको सहयोगमा उद्धार गरिएको मिनी स्टेडियममा रहेका अमृत बोहराले बताउनु भयो । उहाँको मानसिक उपचारको लागि मालिकार्जुन गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले भारतीय एसडिएम कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरेको थियो ।